RASMI: Feysal Xasan Xaashi oo ku biiray Kooxda Mogadishu City Club… (Lambarkee loo xiray xilli maanta la soo bandhigay?) + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Feysal Xasan Xaashi oo ku biiray Kooxda Mogadishu City Club… (Lambarkee loo xiray xilli maanta la soo bandhigay?) + SAWIRRO
(Muqdisho) 16 Sept 2019. Ciyaaryahanka Feysal Xasan Xaashi oo shalay shaaciyey inuu isaga tagay kooxdii uu ka tirsanaa ee Dekedda FC ayaa ku biiray maanta naadiga Mogadishu City Club.
Kooxda Mogadishu City Club ee ka dheesha horyaalka heerka koowaad ee Somali Premier League ayaa maanta si rasmi ah ula saxiixatay Weeraryahan Feysal Xasan Xaashi.
Iyadoo Saxaafadda u soo bandhigtay ciyaaryahan isagoo saxiixaya heshiiska cusub oo uu ugu biiray kooxda Mogadishu City Club ayaa haddana isla maanta waxa ay kooxda MCC shaacisay lambarka uu u xiran doono xiddigan.
Feysal Xasan Xaashi ayaa qalinka ugu duugay kooxdiisa cusub ee Mogadishu City Club qadaraas labo sanadood ah, iyadoo loo gacan geliyey lambarka 10-aad ee kooxdaas.
Xiddigan soo metelay xulka qaranka dalkeenna Soomaaliya ayaa kooxda Dekedda FC oo uu shalay ka soo tagay uga soo biiray xilli ciyaareedkii 2015-16 kooxda LL.PP. Jeenyo.
Waxa uu Feysal ku soo baxay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir sanadkii 2015-kii waxaana uu u dheelayey markaas Degmada Warta Nabadda, isla sanadkaas 2015 ayuu ku guuleystay gooldhalinta horyaalka Soomaaliya isagoo ka tirsanaa Jeenyo.
Waxa uu Feysal Xasan Xaashi shalay ku dhawaaqay inuu isaga tagay kooxda Dekedda oo uu ka tirsanaa in ku dhow saddex sanadood, taasoo uu sanadkii ugu dambeeyey la hantay horyaalka Somali Premier League, waxaana uu maanta ka mid noqday kooxda Mogadishu City Club.
Feysal Xasan Xaashi ayaa kooxda Dekedda FC kula guuleystay labo horyaal iyo hal Super Cup ka hor inta uusan maanta ku biirin naadiga Mogadishu City Club.
soo bandhigista Feysal Xasan ee kooxda MCC halkaan hoose ka daawo:-
"Waa wax laga xishoodo inay naga dhashaan goolashan oo kale” – Aubameyang oo dhaleeceeyay daafacyada Arsenal